izinyanga 11 2 Sekwedlule amaviki - izinyanga 11 2 Sekwedlule amaviki #1301 by bodean713
Ngithuthukile ku-jumbo futhi manje uma ngilanda ifayela laqala ngokuzenzakalelayo bese ngingafuni ukuthola.
Ukuhlela kokugcina: izinyanga ezingu-11 amasonto angu-2 adlule bodean713.
11 izinyanga 1 iviki edlule #1305 by igesi
Yiya kumadokhumenti nakulayini ohlangothini olulandelayo kufanele kube khona.
Uma kungenjalo, thayipha igama lefayela ku "Cinga"
11 izinyanga 1 iviki edlule #1308 by bodean713
Uxolo kudlule isikhathi eside ukubuyela lapha kodwa nginezinye izinkinga nge-sim yami edingekayo ukunakwa. Thina ngibheke kufolda yamadokhumenti futhi ukulanda kwakungekho. Noma kunjalo, ngithole ukuthi inkinga yayiyi-EDGE ngakho ngisebenzisa i-Chrome futhi ilandelwe kahle. Siyabonga
Isikhathi ukudala page: 0.197 imizuzwana